Azo antoka fa fantatr'ireo mpamboly sy mpamboly fiara fa ny fampiroboroboana ny zavamaniry dia ny fampiroboroboana ny fambolena. Izany dia atao amin'ny fomba samihafa sy amin'ny fotoana samihafa. Ny fikarakarana toy izany mandritra ny fitomboan'ny zavamaniry dia hanonona vokatra tsara avy eo. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ny hafetsena voajanahary (humus, dongo ) sy ny mpitrandraka mineraly (nitrogen, potassium, phosphorique). Hanambara aminao ny fomba fampiasana superphosphate sy ny tombony ho an'ny zavamaniry.
Ny Superphosphate dia zezika mineraly be efficace avec phosphor. Ankoatr'ireo phosphorus voalaza etsy ambony (26%) sy nitrogen (6%), ny superphosphate dia manana mikroba toy ny potassium, magnesium, calcium ary solifara ilaina ho an'ny zavamaniry hihinana sy hitombo. Ity diloilo ity dia azo jerena amin'ny endriky ny vovony sy ny granules hatramin'ny 4 mm lehibe.
Misy karazana jiro. Ny Superphosphate dia tsotra - manara-maso ny fanomanana vovobony, saingy ny tsy fahampian'ny ankamaroany dia ampahany betsaka amin'ny rano tsy voapoizin'ny gypsum (hatramin'ny 40%). Tsy mahasoa ny zavamaniry io harona io, fa ny teratany dia voatery mitafy kitapo mavesatra. Fa ny zava-mahadomelina dia mora ampiasaina ary tsy mahandro.
Avy amin'ny simple, Superphosphate dia zaraina miaraka amin'ny sintona 30% -n'ny kalsioma. Ny supèrphosphate indroa dia miavaka amin'ny ampahany kely amin'ny gypsum ary ny ampahany betsaka amin'ny phosphate azo ekena (hatramin'ny 50%) ao amin'ny fananganana.
Inona no atao hoe superphosphate?
Amin'ny ankapobeny, ny phosphorus dia singa iray izay manatsara ny fifindrana avy amin'ny dingana famokarana mavitrika amin'ny famolavolana amin'ny fotoam-bary. Ankoatra izany, manatsara ny fitombon'ny voankazo sy ny voankazo ny voankazo. Ny fototarosy dia misy amin'ny endriny amin'ny endriky ny organika sy mineraly, saingy ambany ny fatrany ny habibiana. Izany no antony ilàna fanampiana fanampiny amin'ny superphosphate, noho izany:
Misy ny fivoaran'ny fotodrafitrasa;
manatsara ny tsiron'ny voankazo;
mampitombo ny fahavokarana;
Mihena ny fizotry ny oksidia amin'ny zavamaniry.
Ahoana ny fomba hanaovana supèrphosphate?
Ity dipoavatra fôsorosy ity dia ampiasaina amin'ny karazan-tany rehetra, saingy ny fahaiza-manao manokana dia azo atao ao anaty tany tsy misy alaola sy alika. Na izany aza, any anaty ala miaraka amin'ny fihetsiky ny asidra, ny asidra phosphorique avy amin'ny superphosphate dia niova ho aluminium sy iron phosphate, ny vovoka izay, indrisy, tsy voakarakarain'ny zavamaniry. Amin'io tranga io, ireo zaridaina za-draharaha dia mampirisika ny famonoana ny zava-mahadomelina amin'ny vatosokay na ny hama.
Matetika ny fampiasana superphosphate amin'ny lohataona sy ny fararano dia ampiasaina amin'ny famarotana ny tany sy ny famafazana voa, ary koa toy ny maintin-java-manitra lehibe ho an'ny sakafo fanatodizana. Amin'ny ankapobeny, ho an'ny fambolena ny vokatra toy ny ovy, voatabiha, tsaramaso, voankazo, kôkômba ary mba hahazoana rendremana avo dia matetika no omena fanampiana amin'ny famafazana mivantana ao anaty fantsakana.
Noho izany, ny fampiharana superfosfat dia mitaky ireto doka manaraka ireto:
40-50 g / m² rehefa nihady lavaka na lohataona;
rehefa mamboly voninkazo sy zana-ketsa 3 g ao anatin'ny lavadrano tsirairay;
15-20 g / m² ho an'ny orinasa tsara tarehy;
40-60 g / m² miaraka amin'ny hazo saha.
Ahoana no hanamboarana kapa amin'ny superphosphate?
Mba hampiakatra ny fandefasana entona amin'ny zavamaniry, maro ireo zaridaina-mpamboly no manapa-kevitra ny hanomana ny kapa. Na izany aza, tsy mora ny manao izany, toy ny gypsum ao amin'ny fiomanana dia marefo. Noho izany, raha toa ianao ka miatrika ny fanontaniana mikasika ny fomba hamongorana ny superphosphate amin'ny rano, dia manoro hevitra ny fampiasana vinaingitra amin'ny endriky ny granules amin'ity. Ho an'ny rano mangatsiatsiaka dia ilaina ny mitondra 100 g ny supèrphosphate indroa, mifangaro tsara, ary mahandro mandritry ny antsasak'adiny hivoahana haingana sy haingana. Ataovy ao an-tsaina fa miisa 100 litatra ity sakamandimby ity dia nosoloina 20 g of active ingredient. Raha voavolavola ao anaty rano 10 litatra ireo gony 100 ireo, ny vahaolana enti-manavotra dia afaka manamboatra 1 metatra toradroa.
Karazana aretina sy fitsaboana
Voapooka mena "Bell"
Apple Lobo - endri-tsarin'ny karazana malaza, fitsipika manan-danja amin'ny fambolena
Ahoana no hambolena kitapo amin'ny fianjeranao?
Bibikely ao amin'ny zaridaina
Ny zavamaniry maniry - inona izany?
Ahoana no hitahirizana ny karaoty amin'ny ririnina?
Famoahana ny tuja avy amin'ny fametahana amin'ny fararano
Hazo kisoa nohosorana
Pizza misy ronono
Inona no crème ho an'ny fandriana amin'ny bronzer tsara kokoa?
Tompon-daka manerantany amin'ny tondra-drano Tom Daly sy ilay mpilalao sarimihetsika Dustin Lance Black
Libexin - analogues
Ny lapa Ventspils ao amin'ny làlana Livonianina
Fialantsasatra any Turquie amin'ny Septambra
Ny hatsaran'ny vehivavy amin'ny fararano
Rano miaraka amin'ny fihinan'ny menaka - prescription
Fifandraisana amin'ny famantarana ny zodiaka
Inona no ilaina amin'ny maraina?
Jeans-sipa ho an'ny ankizivavy matavy
Ny kisary Kefir - tsara sy ratsy